Pfizer အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအား အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဟုဆို - Xinhua News Agency
Pfizer နှင့် BioNTech တို့က လူများစွာပါဝင်သော ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင် ရောဂါအား အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကို ပြသလျက်ရှိကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု အဆင့် ၃ တွင် Pfizer-BioNTech အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက် လူ ၁၀,၀၀၀ ကျော်အား ထိုးနှံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ယခင်က Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူများ ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအရ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်း မရှိသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာကွယ်ဆေး အာနိသင်ထိရောက်မှုအနေဖြင့် ၉၅.၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယခုရလဒ်များမှာ ကိုဗစ်-၁၉ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအား အလျဉ်းသင့်သလို စမ်းသပ်ခြင်းမှ ပထမဆုံး ဆေးအာနိသင်ရလဒ်များဖြစ်သည်။
“ဒီရောဂါကနေ လူတွေကို ကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် ဒီရလဒ်တွေက အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ထပ်မံသက်သေပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Pfizer ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Albert Bourla က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာနက Pfizer-BioNTech ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးအတွက် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများအား ယခင်လက ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအနေဖြင့် ယခင်ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပြီး အနည်းဆုံး ၆ လအကြာ၌ Pfizer-BioNTech အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#US, #Pfizer, #BoosterShot, #COVID_19, #Protection, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #အမေရိကန်, #အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး, #ကိုဗစ်_၁၉, #ကာကွယ်ခြင်း, #ဆင်ဟွာ
WASHINGTON, Oct. 21 (Xinhua) — Pfizer and BioNTech announced Thursday thatalarge-scale trial of their COVID-19 vaccine booster showed it restored full protection against the disease.
InaPhase3randomized, controlled trial,aPfizer-BioNTech booster dose was administered to more than 10,000 individuals 16 years of age and older, who previously received the Pfizer-BioNTech primary two-dose series.
It showedarelative vaccine efficacy of 95.6 percent when compared to those who did not receiveabooster.
Last month, the U.S. Food and Drug Administration authorized the booster shots for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, allowingasingle booster dose of the Pfizer-BioNTech vaccine be administered at least6months after completion of the primary series to individuals 65 years of age and older. Enditem